Xildhibaan Mahad Salaad oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu ka tanaasulay dacwadii badda ee Kenya | Wardoon
Home Somali News Xildhibaan Mahad Salaad oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu ka tanaasulay dacwadii...
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka tanaasulay dacwadii Maxkamada Caalamiga ee u dhexeysay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay in shirka ka dhacay Nairobi uu ahaa mid lagu oggoleensiinayay Madaxweynaha Soomaaliya inuu wadahadal ka galo muranka dhulka badda ay Soomaaliya leedahay.
Qoraalka Mahad Salaad oo dhameystiran hoos ka aqriso.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad ayaa ku guulaystay in uu ku qanciyo Madaxweyne Farmaajo in uu ogolaado in khilaafka Badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu xaliyo wadahadal sida uu baahiyay Teleefishinka Qaranka Itoobiya oo la socday safarka Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Niarobi ee dalka Kenya!.
Halka Villa Soomaaliya wali ay ku maaweelinayso dadka Soomaaliyeed in kulankii Nairobi looga hadlay oo kaliya xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood iyo ka wada shaqaynta dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo baayac mushtarka.
Warar sugan oo aan ka helay ilo ka agdhow xaafiiska Madaxweyne Farmaajo waxay ii xaqiijiyeen in ajandaha kulanka labada Madaxweyne uu ahaa arinta muranka Badda iyo dacwada hortaala Maxkamada Caalamiga ah (ICJ) lkn waxay ka gaabsadeen in ay sheegaan go’aamada ay ka gaareen arintaan labada Madaxweyne!
Haddaba, halkaan waxaa ka muuqata in Baddii Soomaaliya la beec geeyay Madaxweyne Farmaajo na ka tanaasulay dacwadii Maxkamada Caalamiga ah hortaalay, Baddii Soomaaliyana u dhiibay sidii shalay uu u dhiibay Abdikariim Qalbi Dhagax!
Previous articleWararkii ugu Dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Qaraxii Muqdisho ka dhacay
Next articleIlhaan Cumar oo ka guuleysatay weerarkii labaad ee Taageerayaasha Yuhuuda
Rai’sul wasaaraha UK oo kasheekeyay sida uu noqday markii uu xanaan...
Berito oo bilaaban doonta doorashada Aqalka Sare